Akuyona imfihlo ukuthi ekhulwini lama-21, izenzo zobulili phakathi kwentsha zanda kakhulu. Mayelana "nalokhu" esikuzwayo futhi sibone kuyo yonke indawo: ku-TV, ku-Inthanethi, imibhalo eqoshiwe ocingweni, ku-elevator, izingxoxo esikoleni ... Izingane azisekho ukukhalaza phambi kwabazali bazo lapho zibukela i-movie lapho kunezigcawu zothando.
Wonke umuntu ofunda esikoleni akafuni ukuthola ulwazi oluningi lwama-anatomy, indlela yokuzama ukwenza ngokwayo. Kungani? Hhayi, okokuqala, ukuze ungafani neontanga zabo abazama lokhu ubumnandi, ukuba bangaba mnyama omhlophe. Okwesibili, eminyakeni yokuguquka, ukuvimbela abazali nabafundisi bezingane kuyilingo lokulingwa. Njengoba wazi, isithelo esivinjelwe siphunga! Futhi-ke, isithakazelo ngokwalo, uhlobo luni lwezinzwa. Futhi kanjalo ... umphumela wobuthakathaka obusha akuyona ukukhulelwa okufunayo kwasebusheni, ukukhipha isisu noma ukushiya usana olusha ekhaya lokubeletha, intsha ebuthakathaka, izinkinga zempilo nokuzisola empilweni. Ngaphezu kwalokho, aziphuli nje kuphela ukuphila kwabo, kodwa futhi hhayi ingane engenacala eyayifuna ukuhlala ethandweni nomusa.
Ingabe udinga le mihlatshelo, lapho ungajabulela ukuphila ngengqondo?
Njalo ngonyaka, izikhangiso eziningi zivela ezikhuthweni zokukhulelwa: izincwajana ezincane, amaphosta ezibhedlela, ama-pharmacy, ezitolo - konke kubonakala. Kodwa inani lamantombazane emgqeni wokukhipha isisu, ngeshwa, alinciphisi!
Namuhla, kunezindlela eziningi zokuvimbela ukuvimbela ukukhulelwa okuzovimbela hhayi ukukhulelwa kokuqala kuphela, kodwa futhi nokulondoloza impilo yakho, ngakho kubalulekile ukwazi ukuthi ungazivikela kanjani usemncane kusukela ekukhulelwe. Kodwa ungagijimeli ekhemisi futhi uthenge konke. Kumele uthintane nomjozi wezifo zamazinyo ukuthi, ngokusekelwe eminyakeni yakho nesimo sezempilo, uzokutusa okulungile kuwe.
Uma ucabanga ukuthi lokhu konke "okungenangqondo" futhi ucabanga ukuthi ungayisingatha ngokwakho, uma ukhetha indlela yokuvikela, ungakhohlwa ngemininingwane ebalulekile.
Indlela yokukhulelwa kufanele ikuvikele ngangokunokwenzeka kusuka ekukhulelweni okungafuneki;
Ukuvikelwa okuphezulu kusuka kumagciwane kanye nezifo kuyadingeka;
Imikhiqizo yokukhulelwa kufanele ibangele ukulimala okuncane emzimbeni wakho omusha.
Wonke amakhondomu aziwayo. Ukuvikelwa okungu-100% ngezifo ezithathelwana ngocansi ezifana ne-AIDS, i-syphilis, i-gonorrhea, i-chancroid, i-trichomoniasis, i-chlamydia, i-herpes yomzimba, i-lymphogranuloma ye-venereal nezinye izifo eziningi ezimbi.
Kodwa kaningi abafana benqaba ikhambi elinjalo futhi ngalesi sikhathi amantombazane anesibopho sokucabanga. Futhi ngokuzumayo awusiye owokuqala angafuni ukuvikelwa? Ngokungazelelwe, lowo owayengumlingani wangaphambili wayenesihlobo esithile sesifo, esizovela maduze kuwe maduzane? Kufanele uqaphele lesi sinqumo futhi ucabange ngemiphumela.
Kukhona ama-gel namakhandlela afakwe ngaphambi kokulala ngokocansi emzimbeni. Kodwa kulokhu awukwazi ukukwenza ngaphandle kokuvakashela umjozi wezifo zogciwane.
Manje mayelana nezindlela zokuvikelwa, okungafanele zisetshenziswe kwasekuqaleni, futhi kungani.
Amaphilisi okulawula ukuzalwa kwamahomoni. Kuthathwa ngomlomo (okungukuthi, ngaphakathi, ukugeza ngamanzi), nsuku zonke i-tablet eyodwa ngesikhathi esifanayo.
Kungani ungafanele uwathathe ngesikhathi sokukhula kwentsha.
Uma usebenzisa lezi zidakamizwa, kufanele kube nomjikelezo ovamile wokuya esikhathini, kuyinto engavamile kakhulu kuze kube yilapho ukulethwa.
Uma ungaphuzi ngaleso sikhathi, okungenani iphilisi eyodwa ingozi enkulu yokukhulelwa.
Amaphilisi anjalo aphikisana nabantu abanegazi elibi, ama-varicose veins, thrombophlebitis nezinye izifo. Yiqiniso, uma uneminyaka engu-15-17 ubudala, usazi ukuthi yini i-varicose veins. Ngakho-ke, buza ukuthi ngabe lesi sifo sikhona kumama, sithunyelwa ngokwefa, futhi maduzane sizozizwisa. Kulokhu, akuvunyelwe ukuthatha amaphilisi, ngakho-ke khetha enye indlela yokuzivikela kangcono usencane kusukela ekukhulelwe.
Kumele ucabange ukuthi amaphilisi e-hormonal ahlale ephazamisa umzimba womuntu, abulale isibindi, izinso, ibhalansi ye-hormonal yezinto eziphilayo njengento yonke iyaphazanyiswa.
Indlela engavamile yokuvikelwa iphazanyiswa ngokobulili. Kodwa bambalwa kakhulu abantu abazi ukuthi isidoda singangena phakathi kweqanda ngesikhathi sonke socansi. Futhi ungikholelwe, umlingani wakho ngeke azizwe lokhu.
Ikhambi elilandelayo yi-IUD (i-intrauterine device).
Le yilokho okuthiwa i-loop noma i-spiral, eyethulwa emgodini wesibeletho iminyaka eminingana (kuze kufike ku-10), emva kwalokho iguqula komunye noma isuswe kalula. Lo msebenzi wenziwa kuphela udokotela-gynecologist.
Kungani ungafanelanga amantombazane amancane?
Izazi ze-gynecologists ziphikisana ukuthi lolu hlobo lokuvikelwa luhle kubantu besifazane abaneminyaka engama-40-45 abangabonanga izingane eziningi futhi baphile impilo ejwayelekile yocansi nomlingani oyedwa. Kumantombazane, le ndlela iyingozi, ngoba ukulimala okuncane kakhulu ezindongeni zesisu kungabangela ukungasebenzi.
Kodwa empilweni kunezimo ezehlukene: ukulala ngokobulili okungenasiphakamiso, ubulili esimweni sokudakwa, ukudlwengula, noma uvikelwe, kodwa ngesikhathi senzalo ikhondomu yadabula ngengozi. Kulezi zimo, ukukhulelwa kwangemva kokubeletha ngemuva kokubeletha (ukusetshenziswa komlomo kwamaphilisi e-hormonal noma injection ye-intrauterine ye-agent ekhethekile) isetshenziswa. Le ndlela ivimbela ukukhulelwa, okwenza ukukhulelwa kwesisu kusencane. Yenziwa kuphela yi-gynecologist futhi kungakapheli izinsuku ezimbili emva kokulala ngokocansi.
Ososayensi abaningi baye bafakazela ukuthi izindlela zokuvimbela ukukhulelwa kwe-postcoital azilimazi kakhudlwana owesifazane kunokukhipha isisu. Kodwa kufanele ukhumbule ukuthi ngale ndlela futhi ukuphulwa kokukhulelwa okungafuneki akukwazi ukuhlukunyezwa ngisho nenani elikhulu lezenzo zocansi - ukusebenza komuthi we-postcoital kuncishiswe kakhulu.
Futhi ekuphetheni, ngingathanda ukubhekisela ngqo kumantombazane!
Amantombazane othandekayo, khumbula, akekho ozokhathalela impilo yakho ngendlela ozenza ngayo wena ngokwakho. Ungathembeli kuphela kumlingani wakho, ikakhulukazi kule minyaka, ngisho noma ethi uyakuthanda futhi akayikuyeka. Ungazishiyi ubuntwana, ugijimise ku-diapers, ukholwe kimi, kuzokukukhathaza ngokushesha. Ungazikhukhumezi ngokukhipha izisu. Ngalokhu ngeke ulibhubhise nje kuphela ucezu lwakho - uzobhubhisa incazelo yempilo yakho, ngenxa yalokho abesifazane abadalwa khona. Khumbula, Njengomama ozayo, usuvele unesibopho sempilo yakho ngaphambi kwengane engakazalwa.
Impilo yakho isesandleni sakho!
Indlela yokubeka kahle ikhondomu: Ukufundisa
Sicela uqaphele, kunezindlela eziningi nezindlela zokuvimbela ukukhulelwa
Indlela yokuthola imizwa yomfana
I-black currant jam (i-Kiev)
UmkaPaul we-Adult Agatha Muceniets wabika ukukhulelwa kwesithathu
Indlela yokusebenzisa i-powder ebusweni
Izitshalo ezingaphandle: i-caladium
Isithelo sebhedi kwi-skewers
Kuyini uWannabe? Ukuphefumula okulungile
Jabulela emshadweni - imidlalo nemincintiswano
Yimaphi ama-mask ayasiza izinwele kanye nomzimba
Okufanele ukwenze uma ubuhlobo buphelile
Izinkimbinkimbi zobulili - eziyinqaba nakakhulu
Izifo zesibindi ngesikhathi sokukhulelwa
Amathiphu ambalwa we-oda endlini